Tag: iibka xoogga | Martech Zone
Taliska Scratchpad: Habka Ugu Dhaqsaha Badan ee Loogu Heli Karo loona Cusboonaysiiyo Iibinta Adeegyada Shabakad kasta
Jimco, Abriil 2, 2021 Khamiis, Juun 22, 2021 Douglas Karr
Maamulayaasha xisaabaadka ee ku dhowaad dhammaan ururada iibka ayaa ku qulqulaya qalab iibin aad u tiro badan oo laga baahiyay CRM-kooda. Tani waxay ku qasbeysaa dadka wax iibiya inay galaan shaqo waqti-qaadasho iyo daal badan oo marin-u-socodka iyo dib-u-socoshada u dhexeysa aaladaha, maareynta daraasiin tab ah biraawsar, guji keligood ah, iyo koobiyeynta daaliska iyo daalidda, dhammaantood iyagoo isku mar isku dayaya inay cusbooneysiiyaan Salesforce. Natiija ahaan, waxaa hoos u dhacay waxtarka maalinlaha ah, waxsoosaarka, iyo, ugu dambeyntiina, waqtiga dadka wax iibiya ay ku qabsadaan shaqooyinkooda — iibiyaan. Taliska Scratchpad
Waqtiyada qaarkood, inta badan waa howlaha ugu fudud ee sababa kuwa horumariya webka madax xanuunka ugu weyn. Mid ka mid ah kuwan ayaa ah badhanka fudud ee Add to Calendar oo aad ka heli karto boggag aad u tiro badan oo ka shaqeeya barnaamijyada jadwalka muhiimka ah ee khadka tooska ah iyo barnaamijyada desktop-ka. Xikmadooda aan dhamaadka lahayn, dhufaysyada isku dhafan ee muhiimka ahi waligood kuma heshiin heerka caadiga ah ee loogu qaybinayo faahfaahinta dhacdada; taas awgeed, jadwal kasta oo weyn wuxuu leeyahay qaab u gaar ah. Apple iyo Microsoft ayaa qaatay faylasha .ics sida